၁၃ နှစ်နဲ့ ၂၉ ပတ်သား ပန်းမင်းသမီးရဲ့ ကံကြမ္မာ - Yangon Media Group
အပြုံးချိုချိုနဲ့ မြန်မာပြည်ဖွား ဂျပန်အဆိုတော် မိုရီဆာကီဝင်း: မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာပြည်ဖွား အပြုံး ချိ
ငြိမ်းချမ်းရေးကို စာပေအနုပညာဖြင့်တင်ဆက်ပုံဖော်မည့် 'ငြိမ်းချမ်းရေးကဗျာသရုပ်ဖော်တင်ဆက်မှုပြိုင်ပွဲ' နိုဝင်ဘာတွင်ပြုလုပ်မည်: ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၅ - ငြိမ်းချမ်းရေး ကို စာပေအနုပညာဖြင့် တင်ဆက်ပုံ ဖော်
ဗန်းမော်-မန္တလေးလမ်း ဧရာဝတီမြစ်ရေ ကျော်လွန် နေသောကြောင့် ခရီးသွားများ အဆင်ပြေစေရန် တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကူညီပေးနေ: ဗန်းမော်၊ သြဂုတ် ၁၅- ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့နယ်တွင် ဧရာဝတီ မြစ်ရေ ဆ
ခန္တီး၊ ဟုမ္မလင်းတို့တွင် မြစ်ရေစိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်ရောက်နေ၍ မုံရွာအခြေစိုက် အမြန်ရေယာဉ်များပြေးဆွဲမှု ငါးရက်နားမည်: မုံရွာ၊ သြဂုတ် ၁၅- ချင်းတွင်းမြစ်အ ထက်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့ကြီးများဖြစ်
ရတနာ့ဂူနတ်ပွဲတွင် သိုးဆောင်းမိဖုရားများ၊ ဗောင်းဆောင်းအမတ်များနှင့် မိသားစုများဖြင့် ရိုးရာမပျက် ညီလာခံသဘင် အကျဉ်းချုံးပြုလုပ်: မန္တလေး၊ သြဂုတ် ၁၅- မန္တလေးမြို့ အမရပူရမြို့နယ် ငယ်တိုးကျေးရွာအုပ် စု၊ ရ
ဆေးတက္ကသိုလ်များတွင် အမှတ်တစ်ခုတည်းကြည့်ပြီး ရွေးချယ်ခြင်းမှာ မသင့်၊ အမှတ်အပြင် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြင့် ရွေးချယ်ရန် တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြော: ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၅- ဆေးတက္က သိုလ်များတွင် အမှတ်တစ်ခုတည်း ကြည့်ပြီး ရွေး
ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းနားကျေးရွာများ ရေဝင်ရောက်နေမှုကြောင့် မြစ်အထက်ပိုင်းသွား အမြန်ရေယာဉ်များ အရှိန်လျှော့မောင်းရန် သတိပေး: မုံရွာ၊ သြဂုတ် ၁၅-မိုးရာသီကာလ ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းရှိ မြစ်ကမ
ဆန်းသစ်ကတော့ မ.ထ. သ လိုင်းထက်စာရင် YBS လိုင်းတွေ ကို ပိုကြိုက်တယ်: YBS ကားတွေ ပြောင်းလဲပြီး တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ယာဉ်လမ်းကြော တွေ နည်
မ. ထ.သ ကိုတော့ သဘောမကျ တာ အမှန်ပါပဲ ~ သက်ဆုနဒီ: YBS ကားတွေ ပြောင်းလဲ ထားတဲ့ လလည်းကြာပြီဆိုတော့ ပြောင်းလဲမှုလည်း အ
အုန်းသီးမှ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်: ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၅- ထိုင်းနိုင်ငံမှ နည်းပညာကို ရယူပြီး အုန်းသီးမှ စားေ
မောင်ခိုင်ခန့်( အမျိုးသားစာပေဆု )
၁၃ နှစ်နဲ့ ၂၉ ပတ်သား ပန်းမင်းသမီးရဲ့ ကံကြမ္မာ
အရိုးစုတစ်ခုသည် သန်စွမ်း သောလက်၌ တံစဉ်တစ် ချောင်းကိုင်လျက် လူများကို ရိတ်ပြနေသည့်ရုပ်ပုံမှာ ၁၃ ဂဏန်း ၏ အထိမ်းအမှတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။
ယင်းအတွက် ၁၃ ဂဏန်းကို လူအတော်များများ ကြောက်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ဂဏန်းဗေဒင် နားလည်သူများက ပို၍ကြောက်သည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် လောကီပညာရပ်အရ အပျက်သဘော ဆောင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၁၃ ဂဏန်း၏ အထိမ်းအမှတ် လက္ခဏာရုပ်ပုံမှာ လူနည်းစုသာ နားလည် သည့်ပုံဖြစ်သည်။ ဆရာကိုင်ရို၏ ဂဏန်း ဗေဒင် (Book of Numbers by CHEIRO) စာအုပ်တွင် ၁၃ ဂဏန်း၏ အ ထိမ်းအမှတ်လက္ခဏာပုံနှင့် ပတ်သက် ၍ အရိုးစုတစ်ခုသည် ကွင်းပြင်တစ်ခု အတွင်း၌ လူများကို တံစဉ်ဖြင့်ရိတ်သိမ်း လျက်ရှိစဉ် မြက်များကြားမှ ခြေနှင့်လက် ထွက်လာပြီး သရဖူဆောင်းထားသည့် လူတစ်ယောက်ဦးခေါင်းသည် တံစဉ်နှင့် ရိတ်ခံ၍ ပြတ်ကျပြီးနောက်ပိုင်း ဆံပင် အလယ်တည့်တည့်ခွဲထားသော မိန်းမတစ်ယောက်၏ ဦးခေါင်းပေါ်ထွက်လာခြင်း လက္ခဏာဟုဆိုသည်။ အများစုက သေခြင်းတရား၏ လက္ခဏာကို ညွှန်းဆို သည်ဟု ဟောကိန်းထုတ်ကြသည်။
ယင်းမှာ ဆရာကိုင်ရို၏ ဂဏန်းဗေဒင်နည်းအရ တွဲဂဏန်း ၁၃ ဖြစ်ပြီး ပေါင်းခြင်း ၄ ရသည့် သီးခြား ဂဏန်းဖြစ်သည်။ ၄ ဂဏန်းသည် အ ခြားသော ဂဏန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အောင်မြင်မှုမရှိဟု ဟောကိန်းထုတ် သည်။ ၄ ဂဏန်းသည် ၁၃ ဂဏန်း၊ ၂၂ ဂဏန်း၊ ၃၁ ဂဏန်းများနှင့် တူညီသည်။ ယင်းဂဏန်းများ အောင်မြင်သည့် နေ့ များမှာ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာနေ့ များဖြစ်သည်ဟု ရည်ညွှန်းထားသည်။
ယင်းအတွက် တွဲဂဏန်း ၁၃ အပါအဝင် ၄ ဂဏန်းများ လာဘ်ကောင်း စေရန် ကြားရောင် အပြာနု၊ အညိုရောင် များကို အသုံးပြုသင့်သည်။ အရောင် တစ်ရောင်ပေါ် အခြားတစ်ရောင်ဖြင့် ရောစပ်၍လည်း သုံးစွဲကြသည်။
အထူးသဖြင့် တွဲဂဏန်း ၁၃ သည် အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဂဏန်းဖြစ်သဖြင့် မသုံး တတ်လျှင် ပျက်စီးစေသည့် သဘောရှိ သည်။ ထို့အတူ အနာဂတ်အတွက် မ မျှော်လင့်နိုင်သော ခန့်မှန်းရခက်သော ဂဏန်းဟု ဆိုသည်။ ယင်းအတွက် ၁၃ ဂဏန်းကို ကောင်းကျိုးမပေးသည့် ဂဏန်း ပျက်စီးစေနိုင်သည့်ဂဏန်းဟု ယူဆကြ သည်။ ဟောကိန်းထုတ်ကြသည်။ ၁၃ ဂဏန်းနှင့်ပတ်သက်၍ တိကျသော ဟော ကိန်းထုတ်နိုင်သည်မှာ ပြောင်းလဲမှု ရှိခြင်း ဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့တည်းမဟုတ် ပြီးဆုံး ခြင်းရပ်နားခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ကောက် ယူနိုင်သည်။
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ဖေဖော်ဝါ ရီလ ၁၃ ရက်တွင် မွေးဖွားပြီး လုပ်ကြံခံရ သည့်အခါ ကျည်ဆန် ၁၃ ချက် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရသည်မှာ ထင် ရှားသည့် သာဓကဖြစ်သည်။
၂၉ ဂဏန်းမှာ အနာဂတ်အ တွက် ကောင်းကျိုးမပေးသကဲ့သို့ မရေ ရာမသေချာသော ဂဏန်းဖြစ်သည်ဟု ဟောကိန်းထုတ်ကြသည်။
တွဲဂဏန်း ၂၉ သည် ပေါင်း ခြင်း ၁၁ ရသည့် တွဲဂဏန်းအဖြစ် ကောက် ယူပါက ၁၁ တွဲဂဏန်း၏ သင်္ကေတ လက္ခဏာမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် လက် တစ်ဖက်နှင့် ပါးစပ်ပိတ်ထားည့် ခြင်္သေ့ တစ်ကောင်၏ ပုံဖြစ်သည်။ ယင်းသင်္ကေ တလက္ခဏာအရ ၁၁ တွဲဂဏန်းနှင့် တိုက်ဆိုင်ပါက ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရန် မလွယ်ကူသည့် အကျပ်အတည်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။
၁၁ ဂဏန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာကိုင်ရို၏အဆိုအရ ၁၁ ဂဏန်းနှင့် တိုက်ဆိုင်ပါက နိမိတ်မကောင်းခြင်း၊ အန္တရာယ်များခြင်း၊ အမှုအခင်းဖြစ်ခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဂဏန်းအဖြစ် အဓိ ပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ ၁၁ ဂဏန်းနှင့် ပတ် သက်၍ အနောက်တိုင်း သင်္ချာဗေဒနည်း အရတွက်ချက်လျှင် တွဲဂဏန်းနှင့် ပေါင်း ဂဏန်းကို တွက်ချက်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ စနစ်တကျ တွက်ချက်ပြီးမှသာ ဟောကိန်း ထုတ်သင့်သည်။
ယင်းဂဏန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့တွင် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဆောက်အအုံ WTC အဆောက်အအုံနှစ်ခု၊ လေယာဉ် နှစ်စင်းနှင့် တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ဘာလင်တန်မြို့ရှိ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကို လေယာဉ် တစ်စင်းနှင့် အသေခံ တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း တို့ကို အနောက်တိုင်း ဂဏန်းဗေဒင်နည်း အရ တွက်ချက်လျှင် ၁၁ ဂဏန်းနှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်။
အနောက်တိုင်း ဂဏန်းဗေဒင်သင်္ချာနည်းအရ နယူးယောက် (New York City) ၏ပေါင်းခြင်း ၁၁ နယူး ယောက်သည် ၁၁ ခုမြောက် ပြည်နယ်၊ လေယာဉ်ခရီးစဉ်အမှတ် ၁၁၊ လေယာဉ် ပေါ်ပါရှိသည့် ခရီးသည် ၉၂ ဦးမှာ ၁၁၊ လေယာဉ်ခရီးစဉ်အမှတ် ၁၇၅ ပေါ်တွင် ပါရှိသည့် ခရီးသည်မှာ ၆၅ ဦးမှာ ၁၁၊ Twin Tower ၏ ပုံသဏ္ဌာန် ၁၁၊ အ ဆောက်အအုံနှစ်ခု၏ အထပ်ပေါင်း ၁၁ဝ မှာ ၁၁ ဂဏန်းဖြစ်နေသည်။
ထို့အတူ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ် တိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ The Pentagon ၏ စာလုံးအရေအတွက်မှာ ၁၁၊ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်၏ အကျယ်အဝန်း ၂၉ ဟက်တာမှာ ၁၁ ဖြစ်သည်။ ထူးခြားချက်မှာ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အ ဆောက်အအုံနှင့် ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ် တိုက်ခိုက်ခံရသည့်နေ့မှာ ၁၁.၉. ၂ဝဝ၁ ရက်ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး၏ ၂၄၅ ရက်မြောက်မှာ ၁၁ ဖြစ်နေသည်။ တစ်နှစ်တာရှိ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်မှ ၂၄၅ ရက်နုတ်လျှင် ရက်ပေါင်း ၁၁ဝ ကျန်ရှိနေခြင်းမှာလည်း ၁၁ ဖြစ်နေခြင်း မှာ တိုက်ဆိုင်လွန်းလှသည်။ ယင်းအ တွက် ၁၁ ဂဏန်းကြောင့် တိုက်ခိုက်ခံ ရပြီး လူ့အသက်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
၂ဝဝ၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟန်းမြို့နယ် ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်ကြီးပေါ်၌ လင်းတငါးကောင်နားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနောက်တိုင်း ဂဏန်းဗေဒင်နည်းကို အတုယူ၍ မြန်မာ့ ဗေဒင်နည်းပညာအရ တွက်ချက်ရာတွင် ၁၁ ဂဏန်းတိုက်ဆိုင်နေသည်။ မြန်မာ့ ဗေဒင်ကိန်းဂဏန်းအရ လင်းတမှာ ၁၁၊ တာဝါ ၁၁၊ ဗဟန်းမှာ ၁၁ ဂဏန်း အဖြစ် ကောက်ယူရရှိသည်။ အနောက်တိုင်း သင်္ချာဗေဒနည်းနှင့် ရတနာပုံခေတ် အယူတော်မင်္ဂလာအမတ်ကြီး ဦးနိုး၏ လင်းတနားနိမိတ် ဟောကိန်းမှ ၁၁ ရက် အတွင်း ရက်ပေါင်း ၁၁ဝ အတွင်း၌ ဆက် သွယ်ရေးနှင့်ဆိုင်သော နေရာများတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်မည်ဟု ကြိုတင်ဟော ကိန်းထုတ်ခဲ့ရာ ၁၁ ရက် အတွင်း ဗဟန်း စာတိုက်တွင် စာအိတ်ဗုံး ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။
ယခု နောက်ဆုံးထုတ်ဝေသည့် ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ်မှာ အတွဲ ၁၃ ဖြစ်ပြီး အမှတ်မှာ ၂၉ ဖြစ်သည်။ Flower ကို အနောက်တိုင်းသင်္ချာ ဗေဒနည်း တွက်ချက်လျှင် ၃၁ ရသည်။ ၄ ဂဏန်း အဖြစ်ပေါင်းခြင်းရသည်။ ကိန်းဂဏန်း အရ အတွဲ ၁၃ နှင့် Flower ၃၁ သည် ကက်ကင်းကျနေသည်။
အထူးသဖြင့် ယခုတစ်ပတ်ထုတ် ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ်၏ ထူးခြားသည့် ကိန်းဂဏန်းများမှာ ၁၃ ဂဏန်း၊ ၂၉ ဂဏန်း၊ ၁၁ ဂဏန်း၊ ၄ ဂဏန်း၊ ၃၁ ဂဏန်းများပါဝင်နေသည်။ ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြို တင်တွက်ချက်မှုများအရ အတွဲ ၁၃၊ အမှတ် ၁၃ နှင့် အတွဲ ၁၃၊ အမှတ် ၄၉ တွင်လည်း ပြောင်းလဲခြင်း ရပ်နားခြင်း သို့ ပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် ကြိုတင်တွက်ချက်ထားသည်။ ယင်းအတွက် ပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ် လူနှင့် Logo စာလုံးအပြာရင့်မှ အဖြူရောင်သို့ ပြောင်းလဲပြီး အောက်ခံအနီရောင်ပေါ်တွင် အဝါ ရောင်Logo တစ်ခု မထင်မရှားတင်၍ ပြောင်းခဲ့သည်။
သို့သော် ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာ နယ်၏ ကံကြမ္မာအရ အမှတ် ၁၃၊ အတွဲ ၂၉၊ ၁၁ ဂဏန်း Flower အား အနောက် တိုင်းသင်္ချာဗေဒနည်းအရ တွက်ချက်ရာ မှရသည့် ဂဏန်း ၃၁ ပေါင်းခြင်း ၄ ၏အညံ့အား ကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ရပ်နားခြင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ရပေတော့ =သည်။
စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါ စေ။
More in this category: « မိုက်ကရိုလှိုင်းယဉ်ကျေးမှု ရန်ကုန်မြို့မှာ လှမ်းခေါ် အငှားယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အောင်မြင်မယ့်အလားအလာ ရှိနေပြီလား »
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာပြည်ဖွား အပြုံး ချိုချိုနဲ့ မိုရီဆာကီဝင်းကို ပရိသတ် အားလုံးကိုယ်စား မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ် ခွန်းဆက်သရင်း ...
17-08-2017 Hits:56 Entertainment ကလောင် - သီဟပျံချီ
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၅ - ငြိမ်းချမ်းရေး ကို စာပေအနုပညာဖြင့် တင်ဆက်ပုံ ဖော်မည့် 'ငြိမ်းချမ်းရေးကဗျာ သရုပ် ဖော်တင်ဆက်မှု(Poetry Slam 2017) ပြိုင်ပွဲ'ကို နိုဝ...
16-08-2017 Hits:247 Political မိုးဆက်ကို
ဗန်းမော်၊ သြဂုတ် ၁၅- ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့နယ်တွင် ဧရာဝတီ မြစ်ရေ ဆက်လက်တိုးမြင့်တက်နေမှုကြောင့် ဗန်းမော်-မန္တလေး မဟာဗျူဟာကားလမ်းပေါ် ရေကြီးရေလျှံမှုမျ...
16-08-2017 Hits:268 Others မိုးဆက်ကို
မုံရွာ၊ သြဂုတ် ၁၅- ချင်းတွင်းမြစ်အ ထက်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့ကြီးများဖြစ် သော ခန္တီး၊ ဟုမ္မလင်းမြို့ကြီးများတွင် မြစ်ရေစိုးရိမ်ရေမှတ်အထက် ရောက် နေ၍ မုံရွာအ...
16-08-2017 Hits:57 life မိုးဆက်ကို